PVC Coated Welded Wire Mesh - China Rise (Tianjin) Steel Sales
PVC dahaarka leh mesh welded ded caag ah waxaa la dhisay silig bir ah galvanized of tayo sare leh. Waxay leedahay PVC budada ded in la farsameeyo by mashiinka toos ah. The daahan caag ah oo siman on this daxalka silig difaaca ku lifaaqan la koolo xoog badan taas oo ka dhigi kordhiyaa cimri dherer of silig. Waxa loo isticmaalaa in xirmo guryaha la degan yahay iyo rasmiga ah sidii beero, beeraha, dhismaha. mesh The PVC dahaarka welded oo waxaa laga heli karaa sida labada duub iyo darfihiisa dushooda, sidoo kale waxaa laga heli karaa in d ...
Min.Order Tirada: 200 Roll / Rolls
Supply Kartida: 200 Roll / Rolls per Day
PVC dahaarka leh mesh welded ded caag ah waxaa la dhisay silig bir ah galvanized of tayo sare leh. Waxay leedahay PVC budada ded in la farsameeyo by mashiinka toos ah. The daahan caag ah oo siman on this daxalka silig difaaca ku lifaaqan la koolo xoog badan taas oo ka dhigi kordhiyaa cimri dherer of silig. Waxa loo isticmaalaa in xirmo guryaha la degan yahay iyo rasmiga ah sidii beero, beeraha, dhismaha. Mesh The PVC dahaarka welded oo waxaa laga heli karaa sida labada duub iyo darfihiisa dushooda, sidoo kale waxaa laga heli karaa midabbo kala duwan sida caddaan, madow, oo cagaar ah.
The silig qalabka hoose oo PVC dahaarka leh mesh silig welded ayaa silig steel, kulul lagu rusheeyey silig galvanized, electro silig galvanized iyo hooseeyo silig steel carbon. habka a daahan horumar degdeg ah. PVC dahaarka leh mesh silig dhamaystirtay welded yeelan karaan daxalka sare resistance.Galvanized mesh welded waxaa dahaarka leh kula lakabka ah qarada waaweyn oo PVC oo la xidh addoonsi in silig by habka kulayl ah. Waxay leeyihiin ilaalinta double. Ma aha oo kaliya ma daahan vinylalkohol shaabadee silig ka biyaha iyo walxa kale xoqe, laakiin mesh ku dahsoon waxaa sidoo kale la ilaaliyo by daahan zinc ah.
PVC dahaarka welded Wire mesh waxaa loo isticmaalaa sida dayrarka, decoration iyo askartii mishiino in warshado kala duwan, beeraha, anigaa soo koraya, beerta isboortiga, afgembi iyo gaadiidka. Oo mesh silig welded vinylalkohol-dahaarka leh ku habboon yahay in loo isticmaalo baqashada yaanyo.
Colors: Green, madow, jaalle ah, iyo buluug, cadaan ama midabyo kale ee macaamiisha codsiga.
PVC dahaarka welded silig faahfaahinta mesh ee xarigga hoose iyo PVC silig dahaarka leh:
Wire Dia ka hor & kadib markii jubbadda PVC
Ka hor inta Coat
Ka dib markii Coat
1.00 - 1,52
1.24 - 2,40
1 × 1/2 inch
1.24 - 2,42
1.28 - 2,90
1.57 - 2,92
1 × 2 inch
2.00 - 2,95
2.20 - 3,61
1,90 - 3.50
2.50 - 4,36
2.85 - 4,88
Previous: Staninless Steel welded Wire mesh
Next: Korontada galvanized welded Wire mesh
1x1 PCV dahaarka welded Wire mesh
2x2 PCV dahaarka welded Wire mesh
Powder Black dahaarka welded Wire mesh
Vinylalkohol Black dahaarka welded Wire mesh
PCV dahaarka welded mesh
PCV dahaarka welded Wire mesh
PCV dahaarka Wire mesh
Welded PCV dahaarka Wire mesh
Korontada galvanized Panel welded mesh
Solayga la solay dhaliyay
PVC xayndaabka dahaarka
Sun Hooska dhaliyay
Wire toosan & Cut